Download game Roblox APK latest version
Ikhasi Lasekhaya AwamathandangoziRoblox
I-Roblox ikuvumela ukuba udlale, udale, futhi ube noma yini ongayicabangela.
* Lungela ukuhlola i-DC Wonder Woman Experience kuRoblox! Mema abangani bakho ukuthi bavakashele isiqhingi esiyipharadesi se-Themyscira, baqeqeshe eceleni kwezakhamuzi ezinempi, futhi uthole imivuzo ekhethekile ye-avatar yakho. *
I-Roblox ingukuphela komhlaba okukuvumela ukuthi udlale, udale, futhi ube yinoma yini ongayicabanga. Joyina izigidi zabadlali futhi uthole izinhlobonhlobo zomhlaba ezingenamkhawulo ezakhiwe ngumphakathi wembulunga yonke!
Usuvele unayo i-akhawunti? Ngena ngemvume nge-akhawunti yakho yeRoblox bese udlala manje!
IZIGIDI ZEMIHLABA ZOKUFUNDA
Esimweni semizwa yokudlala indima ebalulekile? Ufuna ukuncintisana ngokumelene nezimbangi emhlabeni wonke? Noma ufuna nje ukuhlanganyela nokuxoxa nabangane bakho online? Umtapo wolwazi okhulayo womhlaba owenziwe ngumphakathi usho ukuthi kuhlale kunento entsha futhi ethokozisayo ongayidlala nsuku zonke.
DLULA KANYE NGESIKHATHI esithile, nganoma yisiphi isikhathi
Thatha ubumnandi ohambeni. I-Roblox ifaka ukwesekwa okugcwele kweplatform, okusho ukuthi ungadlala nabangani bakho kanye nezigidi zabanye abantu kumakhompyutha abo, amadivaysi eselula, i-Xbox One, noma amahedisethi we-VR.
YIBA NOMA YINI UNGCABANGELA
Yakha futhi ubonise isitayela sakho esiyingqayizivele! Enza ngokwezifiso i-avatar yakho ngamathani ogqoko, amahembe, ubuso, amagiya nokuningi. Ikhathalogu ekhula njalo yezinto, akunamkhawulo ekubukeni ongadala.
Hlangana nabangane emhlabeni wonke usebenzisa izici zokuxoxa, imiyalezo eyimfihlo, namaqembu!
DALA IZWE LAKHO OWNYE: https://www.roblox.com/develop
UMGOMO WOKUVIKELA: https://www.roblox.com/info/privacy
ISIQONDISO SABAZALI: https://corp.roblox.com/ babu/
QAPHELA: Ukuxhumana kwenethiwekhi kuyadingeka ukudlala. Imidlalo yeRoblox isebenza kangcono kakhulu kune-Wi-Fi.